Sida laga soo xigtay xogta hordhaca ah ee Wasaaradda Beeraha ee gobolka, ururada beeraha iyo beeraleyda beeraleyda sanadkan waxaa la soo saaray 34 kun oo tan oo hadhuudh ah, ...
Goosashada khudaarta ayaa lagu dhameeyay gobolka - yaanyo, qajaar, kaabajka, basbaas, karooto, dabocase, basal, iwm. Falanqaynta xogta tirakoobka ayaa sii socota, ...
Beeraha ku yaal gobolka Kostroma ayaa sanadkan soo goostay 719 tan oo baradhada ka yar, Kostromastat ayaa werisay. Laga saaray beeraha ...
Tan waxaa soo wariyay Wasaaradda Beeraha iyo Kheyraadka Cuntada ee Gobolka Nizhny Novgorod. Taariikhdeeda waxay bilaabatay 2000s, markii baradhada la beero ...
Aafada iyo abaaraha xagaaga midkoodna kama hortagin goynta wanaagsan. Sida laga soo xigtay Omskstat, ururada beeraha iyo beeraleyda beeraleyda ah ee gobolka ayaa ururiyey 3,06 milyan tan ...
Jamhuuriyadda Crimea, 20% khudaar badan iyo 18% baradho ka badan ayaa la goostay marka loo barbar dhigo isla muddadaas 2019 ...
Sida ku cad macluumaadka hawlgalka ee Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Tula, gobolku wuxuu galay kaalinta labaad ee dalka marka la eego goynta baradhada. Dalaggu wuxuu dhaafay ...
Natiijooyinka baaritaanka kala duwan ee dalagyada beeraha ayaa looga hadlay Mari El
Wasaaradda Beeraha iyo Cuntada ee Jamhuuriyadda Mari El, kulan jamhuuriyadeed ayaa lagu qabtay qaabka fiidiyowga ee looga hadlayo natiijooyinka tijaabooyinka kala duwan ee dalagyada beeraha ...
Waqtigan xaadirka ah, soo saarayaasha beeraha ee Tervropol Territory ayaa dhameystiraya goynta baradhada. Natiijooyinka ugu sarreeya waxaa laga gaarey degmada Ipatovsky ee magaalada (57 kun ...
Agrarians ee Udmurtia waxay goosteen 94,4 kun tan oo baradho ah
Jamhuuriyadda xilliga beeraha -2020, sida ku cad xogta hordhaca ah, soo goynta guud ee baradhada waxay gaaraysaa 94,4 kun tan, celceliska waxsoosaarka waa 180 c / ha. Hogaamiye ...